एनआरएनए चुनाव : ककसले दिए उम्मेदवारी ? (सूचीसहित)- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
निर्वाचन कमिटीका सदस्य कुलप्रसाद पाण्डेका अनुसार अध्यक्षमा कुमार पन्त र कुल आचार्यले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । त्यस्तै ४ उपाध्यक्षकालागि ९ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन कमिटीका सदस्य पाण्डेका अनुसार मनोनयन दर्ता सकिएर उम्मेदवारलाई नाम फिर्ताकालागि चार बजेसम्मको समय दिइएको थियो ।
उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेपछि बढीमा साँझ ६ बजे भित्रमा मतदान सुरु हुने निर्वाचन कमिटीले जानकारी दिएको छ । अध्यक्षमा सहमतिको प्रयास गरिएपनि सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन हुने भएको छ ।
४१ जना पदाधिकारीका लागि ७७ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
हेर्नुहोस् कुन पदमा कसले उम्मेदवारी दिए ?
पोखरा — विभागीय टिम एपीएफले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रसकन्ट्री प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । चीन र नेपालका खेलाडीबीच बुधबार पोखरामा भएको प्रतियोगितामा एपीएफको टिमले उपाधि जितेको हो ।
टिममा सन्तोषविक्रम विष्ट, गणेश ठकुरी र इन्द्रकला नेम्वाङ सहभागी थिए । २२ किलोमिटर दौड, १९ किलोमिटर साइक्लिङ र १.२ किलोमिटर बोटिङ गरी ४२.२ किलोमिटर दुरी एपीएफका खेलाडीले ४ घण्टा १७ मिनेट २२ सेकेन्डमा पूरा गरे ।
नेपालकै गुरिल्ला ट्रेल टिम दोस्रो भयो । टिमका खेलाडी दामोदर बुढा, दुर्गाराज बुढा र रसिला तामाङले निर्धारित दुरी ४ घण्टा १८ मिनेट २३ सेकेन्डमा पार गरे ।
दौडमा सहभागी हुन चिनियाँ प्राविधिकसहितको टोली पोखराका आएको थियो । टोलीमा चीनका ३० धावक, त्यहाँका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिसहित ६० जना छन् ।
दौडलाई नेपाल पर्यटन बोर्ड, एथलेटिक्स सोसाइटी काठमाडौं, जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की, भूतपूर्व खेलाडी मञ्च पोखरा, सहारा क्लब लगायत विभिन्न संघ/संस्थाले सघाएका छन् ।
चिनियाँ धावक हिमाल हेर्दै दौड्ने
प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ १६:१३